Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato kuleeliyaha gaaska dabiiciga | Cusbooneysiinta Cagaaran
Guryo badan kululeeyayaasha ayaa loo isticmaalaa in lagu kululeeyo biyaha si loogu isticmaalo qubeyska ama jikada. Waxaa muhiim ah in la ogaado kuleeliyaha waxtar badan leh haddii aan dooneyno in aan ku kaydsanno biilasha korantada oo aan uga faa'iideysanno sida ugu fiican ilaha aan haysanno. Maanta waxaan ka hadlaynaa kuleyliyaha gaaska dabiiciga.
Qoraalkan waxaad ku baran kartaa wax kasta oo la xiriira kuleeliyaha noocan ah. Laga soo bilaabo waxa ay yihiin iyo sida ay u shaqeyso kuwee ayaa ugu fiican in la isticmaalo, iyada oo loo marayo faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka mid kasta. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato?
1 Waa maxay kuleyliyaha gaaska dabiiciga?
3 Noocyada kululeeyaha gaaska dabiiciga ah
3.1 Kuleyliyaha gaaska aan biyuhu karin
3.2 Kuleyliyaha gaaska NOx ee hooseeya
3.3 Kululaynta kuleyliyaha gaaska
3.4 Kuleyliyaha gaaska hawada kujira
5 Faa'iidooyinka kululeeyaha gaaska
Waa maxay kuleyliyaha gaaska dabiiciga?
Kuleeliyaha gaaska dabiiciga waa weel ay kujiraan biyaha lagu kululeynayo shidaalkoodu waa gaaska dabiiciga ah.
Dhammaanteen waxaan dooneynaa inaan inta ugu badan ka badbaadinno jeebkeena arrimaha qoyska si aan ugu awoodno inaan ku bixino safarrada, rabitaanka ama wax kasta oo aan dooneyno. Intaa waxaa dheer, iyadoo la adeegsanayo tamar aan gelineyno u heellan xaaladda deegaanka. Kuleyliyaha, sida qalabka kale ee guryaha, aad ayey muhiim ugu yihiin nolosheena, maxaa yeelay iyaga ayaynu kulaalaynnaa biyaha aan isticmaalno.
Xulashada qaab wanaagsan ama aan ku xirneyn waxay ku xiran tahay gabi ahaanba aqoonta la taaban karo ee kuleeliyaha ugu fiican xaaladdeena. Waa muhiim in la ogaado kuleeliyaha aan dooran doonno iyadoo kuxiran tusaalaha, dayactirka ay u baahan tahay, dib u eegista iyo waxtarka. Haddii aan dooran karno midka nagu habboon, waxaan badbaadin karnaa lacag badan dhammaadka bisha. Intaas waxaa sii dheer, waa in lagu xisaabtamo in, kolba haddii ay sare u kacdo waxtarka iyo tayada kuleyliyaha, ay yaraaneyso in aan ku waxyeeleyno deegaanka wasakheynta la sii daayay.
Kuleyliyayaashu waxay leeyihiin gubi mas'uul ka ah bilowga gubashada gaaska. Gaaskani caadi ahaan waa gaaska dabiiciga ah, in kasta oo ay iyaguna jiraan kuleyliyayaal uu shidaalkoodu yahay propane ama naafto. Marka gaaska la kululeeyo, wuxuu u rogaa biyaha ku jira haanta dhexdeeda uumi isla markaana ka baxa wareegyada si loo kululeeyo guriga intiisa kale. Uumiga biyaha waxaa loo isticmaali karaa in lagu xiro hiitarka ama xitaa kuleylka dhulka hoostiisa.
Kuleyliyaha boropoinka ayaa u baahan haan ​​kale oo lagu kaydiyo gaaska, sidaa darteed waxaan qabsaneynaa meel ka badan inta aan jeclaan laheyn inaan u hurno qalabka noocan ah. Kuwa naaftada ah ayaa ka jaban waxayna sidoo kale noo ogolaadaan inaan wax karino. Intaas waxaa sii dheer, waxay u baahan tahay marin looga baxo gaasaska la soo saaray xilligii gubashada, sidaas darteed waxay sidoo kale u baahan yihiin rakibo dheeri ah.
Dhammaan baahiyahani waxay ka dhigayaan rakibidda kuleyliyaha noocan oo kale ah waqti aad u badan oo ugu dambaynna qaali ah. Sababtaas awgeed, kuleyliyaha gaaska dabiiciga ayaa ah kuwa ugu amniga badan uguna macquulsan. Fikradda gaaska dabiiciga waa mid aad u baahsan oo si ballaaran loo adeegsado in loo yaqaan Magaalada Gas.
Noocyada kululeeyaha gaaska dabiiciga ah
Waxaa jira noocyo kala duwan oo kululeeyaha gaaska dabiiciga ah iyo, sidaan horayba u soo sheegnay, waa inaan si fiican u ogaanno midkood si aan u dooranno si aan ugu hagaajinno kheyraadkeenna si fiican, ka dib, lacag u keydiso.
Kuleyliyaha gaaska aan biyuhu karin
Kuleyliyayaashani waxay leeyihiin qol daboolan oo gubasho leh iyo Ha ku cunin hawo guriga gudihiisa ah. Astaantani waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo amaan ah, maadaama gaasaska la soo saaray xilligii gubashada aysan xiriir la yeelanayn hawada aan neefsanayno.
Kuleyliyaha gaaska NOx ee hooseeya
Ogsajiin oksaydh ayaa wasakhaynaya xeryahooda la soo saaray inta lagu gudajiray hawsha gubashada ee leh oksijiinta xad dhaafka ah. Kuleeliyaha aan lahayn nooc kasta oo qawaaniinta qiiqa ayaa wasakheyn badan oo aan waxtar lahayn. Foornada noocan ah waxay leedahay naqshad la mid ah tii hore laakiin waxaa loo diyaariyey in laga sii daayo oksijiin yar oo oksaydh ah.
Kululaynta kuleyliyaha gaaska
Waxay sidoo kale ku hayaan moodeelka sida gaaska oo kale, laakiin waxay leeyihiin faa'iido ah inay dib u isticmaalaan tamarta uumiga biyaha marar badan. Taasi waa, waxay leeyihiin wareeg taasi Jihooyinka uumiga biyaha la isticmaalo in, markeeda, laga caawiyo kuleylka biyaha intiisa kale haanta. Tani waxay yareynaysaa wadarta kharashka tamarta loo isticmaalo kuleylka biyaha, maadaama ay ka faa’iideysaneyso kuleylka haraaga ah ee uumiga la soo saaray.
Iyagu sidoo kale way ka ammaan iyo waxtar badan yihiin waxaanan lacag badan ku badbaadin karnaa isticmaalka gaaska dabiiciga ah.
Kuleyliyaha gaaska hawada kujira
Qaabkan kuleylka ah, si ka duwan kuwii hore, qolka gubashadu wuu furan yahay oo hawada loo isticmaalo kuleylka biyaha waa laga soo ururiyey meesha kuleyliyaha uu yaalo. Kuleyliyayaashani wax badan ayey wasaqeeyaan waana ka waxtar yar yihiin oo ammaan yihiin. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku leexiyaan qaar ka mid ah gaasaska waxyeelada leh gurigeenna.
Ka hadalka sicirka guud waa xoogaa dhib badan, maaddaama ay jiraan kumanaan nooc oo nooc kasta ah. Si kastaba ha noqotee, kululeeyayaasha Hawada (in kastoo ay yihiin kuwa ugu yar ee lagu taliyo) ayaa ugu jaban. Qiimaheedu waa ilaa 300 euro. Tayo hoose, qiimo hoose. Laakiin maahan taas, waa inaan dooranno kuwaan. Wax badan ayaan wasakheyn doonnaa oo waxaan qarash gareyn doonaa gaas badan mustaqbalka fog maadaama waxtarkiisu hooseeyo.
Dhinaca kale, kululeeyayaasha biyaha diidan waxay leeyihiin qiimo is bedbeddela inta udhaxeysa 400 ilaa 1400 euro. Waxay leeyihiin qiimo bilow ah oo aad uga qaalisan, laakiin inay wasakh yareeyaan oo ay waxtar badan yeeshaan, mustaqbalka fog, waxay la macno noqonaysaa isticmaalka gaaska oo yaraada sidaas darteedna, kharash yar.
Faa'iidooyinka kululeeyaha gaaska
Isticmaalka kuleyliyaha gaaska wuxuu leeyahay faa iidooyinkiisa waana kuwa soo socda:
Qiimaheeda badanaa waa jaban (laga bilaabo 300 euro). Waxaa lagu heli karaa guriga.
Saameyntiisa kuleylka biyaha waa wax dhakhso badan oo raaxo leh. Intaas waxaa sii dheer, maadaama ay leedahay heer-kul-kulmeed iyo miis-yaal, waxaa loo qorsheyn karaa in lagu kululeeyo heerkulka aan dooneyno.
Badanaa ma qaataan boosas badan waxayna leeyihiin cimri sannado badan.
Si dhib yar uma baahna nadiifin marka loo barbar dhigo hababka kale ee kuleyliyaha mana soo saarto buuq.
Ugu dambeyntiina, waxaa sidoo kale muhiim ah in la magacaabo cilladaha kuleyliyaha noocan ah. Khasaaraha kaliya ee muuqda waa dayactirkiisa. Waa in la nadiifiyo sanadkiiba mar si looga fogaado burburka iyo saxmada iyo, wixii ka sarreeya, si looga hortago shilalka.
Macluumaadkan waxaad ku dooran kartaa nooca kuleeliyaha kugu habboon adiga kuna keydi inta ugu macquulsan kululaynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Dhaqaalaha Guriga » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato kuleyliyaha gaaska dabiiciga ah